Iindaba - Ulondolozo lwemihla ngemihla kunye nolondolozo lomatshini wokubumbela
1. Inkqubo yeplastiki
Ibhokisi yegiya kufuneka itshintshe ioyile rhoqo. Khetha i-150 (okanye i-220) yeoyile yoxinzelelo oluphakathi. Guqula ioyile emva kweeyure ezingama-500 usetyenzisile kumatshini omtsha, emva koko utshintshe ioyile rhoqo emva kweeyure ezingama-3000. Xa umatshini eyeka nje ukusebenza kwaye i-gearbox isekwindawo enobushushu obuphezulu, tshintsha ioyile. Emva kokuba i-oyile endala ikhutshiwe, sebenzisa intwana encinci yeoyile entsha ukucoca intle, coca into yokuthambisa impompo yeoyile, emva koko udibanise ioyile entsha kwi-1/2 ~ 2/3 yefestile yomgangatho wolwelo.
2. Ukugcinwa kwenkqubo ekhethekileyo ye-hydraulic yokulawula ubukhulu bodonga
Utshintsho lweoyile rhoqo: Inkqubo yesixokelelwano samanzi ihlala icebisa ukusebenzisa ioyile ye-hydraulic engama-46 #. Emva kweeyure ezingama-500 kusetyenziswa umatshini omtsha, kuyacetyiswa ukuba utshintshe ioyile okokuqala, emva koko utshintshe ioyile rhoqo emva kweeyure ezingama-3000. Coca zonke izihluzo (iifilitha zokutsala) ngelixa utshintsha ioyile. , Icebo lokucoca ulwelo oluphezulu, isihluzi sokubuyisa ioyile, isihluzi sevalve yesihlalo) kunye netanki yeoyile, umthamo weoyile ngu-1/2 ~ 2/3 wenqanaba legeji.
3. inkqubo ngamanzi
Utshintsho lweoyile rhoqo: Inkqubo yesixokelelwano samanzi ihlala icebisa ukusebenzisa ioyile ye-hydraulic engama-46 #. Emva kweeyure ezingama-500 kusetyenziswa umatshini omtsha, kuyacetyiswa ukuba utshintshe ioyile okokuqala, emva koko utshintshe ioyile minyaka le (ikhwalithi yeoyile yahlukile, kwaye ixesha lokutshintsha kweoyile linokwahluka), Coca icebo lokucoca ulwelo kwaye itanki yeoyile ngelixa utshintsha ioyile, umthamo weoyile yi-1/2 ~ 2/3 yenqanaba legeji
I-4 yongeza igrisi yoxinzelelo olukhulu rhoqo
Inkqubo yokuhambisa ukungunda kunye nokuvula ukungunda kunye nokuvala zihlala zikhona kwaye zikhawuleza, ke ngoko zixhotyiswe ngezixhobo zokuthambisa ezizenzekelayo okanye ezizenzekelayo, kodwa isixhobo sokuthambisa kufuneka sijongwe rhoqo kwaye sigcwaliswe ngamafutha. Oku kunokunyusa kwaye kwandise ubomi benkonzo kumatshini, kwaye kukuzisele izibonelelo zoqoqosho ezingcono. Ukubuyisela kwakhona ibhloko yesilayidi kaloliwe ohamba yedwa ngokwahlukeneyo, kube kanye ngeveki; amanye amalungu kube kanye emva kotshintsho.
5. Indlela yasemanzini
Ixesha lokuphumla lide. Xa iqondo lobushushu liphantsi, ukubola kwendlela, umatshini opholileyo, ukupholisa umphanda, ukufa kwentloko okupholisa amanzi kunye nezinye iindawo zokupholisa amanzi kufuneka zipholile. Amanzi okupholisa kufuneka acocwe ukukhusela ulwakhiwo lwexesha elide okanye ukubambeka komkhenkce.